थाहा पाउनुहोस् खाली पेटमा पानी पिउँदाका फाइदा | Sagarmatha TV
स्वस्थ जीवनका लागि पानी सबैभन्दा उपयोगी हो । पानी पिउँनु आफैंमा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर यो गर्मीमा पानीको विशेष महत्व हुने गर्छ । हामीलाई लाग्ने भन्दै धेरै रोगहरु पानीका कारण लाग्ने गर्दछन् । पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसमा पनि खाली पेटमा पानी पिउँदा धेरै लाभ मिल्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ । यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो । वरिष्ठ पेट रोग तथा कलेजो रोग बिशेषज्ञ डा. संदीपराज कुवँर पनि मानिस स्वस्थ रहन पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । पेट स्वास्थ्यका लागि बिहानैको मनतातो पानी अमृत समान हुन्छ ।
खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुने बताइएको छ तर गर्मीमा सामान्यतया तातो भन्दा ठिक्क चिसो पानी पिउनु उपयुक्त हुने डाक्टरहरुको सुझाव छ ।
खाली पेटमा प्रशस्त पानी खादा पेटका विकार शौचमार्फत जाने र पेट सफा हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ । तपाईलाई एका बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पेट खाँदा खुलेर शौच आउछ ।
तपाई बाथरुम जाँदा शरीरका उत्तेजित र विकारलाई बाहिर फालिदिनुहुन्छ । जतिधेरै पानी पिउनुहुन्छ त्यति धेरै विकार शरीरबाट फाल्न सहयोग पुग्छ ।
नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भोक लागेन भने के गर्ने ? खाली पेटमा पानी पिउँदा भोग जाग्छ । बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास पानी पिएका भोक जगाउने काम गर्छ ।
पानी पिउदा कोलोन सफा गरिदिन्छ । एक गिलास पानी खाली पेट खाँदा कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा गरिदिन्छ । कोलोन सफा भएमा शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न सहयोग पुयाउछ ।
यदि तपाईले डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने खाली पेट पानी खानु उत्तम उपाय हो । पानी पिउदा कम्तिमा पनि २४ प्रतिशतले मेटाबोलिजमलाई बृद्धि गर्छ । यसको अर्थ तपाईले चाँडो र प्रभावकारीरुपमा खाना पचाउन सक्नुहुन्छ । जसका कारण छोटो समयमा नै तौल घट्छ ।
तपाईलाई अल्छि लागेको छ भने एक गिलास पिउनुहोस । खाली पेट पानी खाँदा रगतका रक्त कोषिकालाई चाँडो बढ्न सहयोग पुयाउछ । जति धेरै कोषिकाको बृद्धि हुन्छ त्यति नै धेरै शरिरमा अक्सिजन प्रबाह हुन्छ । यसको अर्थ तपाईमा एक प्रकारको उर्जा मिल्छ ।
खाली पेट प्रशस्त पानी खादा अनुहारको चमक बढाउछ । शरीरमा जति बढी विकार र उत्तेजित तत्व हुन्छ त्यति नै तपाईको अनुहारको छाला नराम्रो बनाउछ। तर प्रशस्त पानी खाँदा विकार हट्ने भएकोले अनुहारको सुन्दरतामा निखार आउछ ।
समग्र स्वास्थ्यको लागि पानी नभई नहुने तत्व हो । शरीरमा तरल पर्दाथको सन्तुलनका लागि पनि पानी नभई हुदैन । दिनहुँ खाली पेटमा पानी खाँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्छ । तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएमा कुनै प्रकारका रोग लाग्दैन ।
मनाङमा जापानका नागरिक मृत फेला
साग फुटबलः माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल अंक तालिकाको शिर्ष स्थानमा
१३ औं साग अपडेट : २९ स्वर्णसहित नेपालको अग्रता कायमै, २७ स्वर्णसहित भारत दोस्रो
उपनिर्वाचनमा आत्मघात नभएको नेकपाको निष्कर्ष
गढीमाईमा मेला भर्न जाँदा यातायात अस्तव्यस्त
साग फुटबलको पहिलो हाफ : नेपाल र भुटान १/१ गोलको बराबरी
साग फुटबलको फाइनल जारी, नेपाल १-० ले अगाडि
बुधबारदेखि हिमाली भेगमा भारी हिमपात र पहाडी भेगमा पानी पर्ने सम्भावना
विश्व मानव अधिकार दिवसको राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
सागमा नेपाली महिला फुटबल टोली भारतसँग स्तब्ध
काठमाडौँमा आज बिजोर नम्बरप्लेट भएका सवारी सञ्चालनमा रोक
खोटाङमा गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा आगजनी
साग महिला फुटबल– घरेलु मैदानमा स्वर्ण जित्ने अवसर